घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Matteo Guendouzi बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "यो नयाँ वेइरा"। हाम्रो Matteo Guendouzi बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य तपाईं आफ्नो बचपन समय देखि उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूर्ण खाता ल्याउन। विश्लेषणमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि भएको छ। यसको अतिरिक्त, उनको बारे मा थोडा ज्ञात केहि दूर-रहित तथ्यहरु।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनी आफ्नो लामो कपालले तुरुन्त पहिचान गर्न योग्य छन्। यद्यपि, माटेटो ग्वेन्डोजीको जीवनीमा मात्र केहि कम हुन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्दै, उनको पूरा नाम माटियो ग्वेन्डोजी ओली छ। म्याटेय ग्वेन्डौजी पोइसी, फ्रान्समा अप्रिल 14 को 1999th दिनको जन्म भएको थियो। उनको परिवारसँग अफ्रिकाको मोरक्कोबाट भएको उत्पत्ति छ, जहाँ उनको आमाबाबु दुवै जन्मिएका थिए। उनको पिता र आमाले मोरक्को सुरु गरे र अनुकूल आर्थिक परिस्थितिको आनन्द लिनको लागि फ्रान्समा इमर्जिग गर्न रोज्नुभयो।
Guendouzi आफ्नो प्रारम्भिक जीवन Peugeot र Siemens निर्माण शहर Poissy, पूर्व शाही फ्रांसीसी राज्य, पेरिस को पश्चिम (20 मिनेट राजधानी देखि रेल) ​​मा बिताए। बच्चाको रूपमा, उहाँ एक्लै उहाँका प्यारी आमा र बुबासँग एक्लै हुनुहुन्न। Guendouzi आफ्नो भाइबहिनी, मिलान र बहन नाम एक भाइ जसको नाम अपेक्षाकृत अज्ञात छ।
आज भाइबहिनी दुवैको फाइदा उठाउँछन् कि उनीहरूका ठूलो भाइले शीर्ष उडान फुटबल, म्याटिटो ग्वेन्डोजी परिवारको आशिष्को पूर्ति।
अधिक व्यक्तिगत नोटमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवनबारे कुरा गर्दै, गेंडाउजी एक स्वभाविक टचको बच्चा बन्न पुग्यो। यो स्वादले मात्र उठाउँछ जब लक्ष्य प्राप्त गर्न वा लक्ष्य निर्धारण गर्ने क्षमता छोटो छ। शुरुमा, उनको दीर्घकालिक लक्ष्य एक पेशेवर फुटबलर बन्यो। यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा, उनको स्वभाविकता महसुस गरिएको छ। हामी यस लेखमा प्रगति रूपमा हामी यसबारे धेरै कुरा गर्नेछौं।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- क्यारियर बिल्डअप
शुरुमा, गेंडाउजी एक बच्चाको रूपमा देखा पर्यो जसले आफ्नो फुटबल खाए, पिउने र सुत्न थाल्यो। त्यसोभए, सबैको घर र Poissy पड़ोसी Guendouzi मजाक किनभने म एक सहज संग एक राम्रो बच्चा थियो र आफैमा गहिरो विश्वास।
फुटबलर बनेको ग्वेन्डोजीको इच्छा आयो जब उनी आफ्नो हृदयको क्लबको लागि 5-वर्ष-उमेरको धन्यवाद थियो।शस्त्रागार एफसी. तपाईंलाई थाँहा थियो?... Guendouzi आफ्नो पिता संग, को भिडियो संग देख्यो पैट्रिक विएरा, थियरिरी हेनरी र अन्य जो वर्ष 2004 मा इतिहास बनाएको छ किनकि तिनीहरूले प्राइम लीग खिताब विजेता गरे।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- दर्दनाक क्यारियर सुरू गर्नुहोस्
अर्को वर्ष 2005 माउटो ग्वेन्जिज आमाबाबुले आफ्नो छोरा को पड़ोसी पीएसजी मा परीक्षण को लागि ले 29 मिनेट आफ्नो घरबाट टाढा जानुहोस्। उनले एक सफल परीक्षण गरेका थिए र उनको क्यारियर सबै सेट र दौड्यो।
आफ्नो युवा क्यारियर मा प्रारम्भिक, म्याटिटो ग्वेन्डौजी कुनै व्यक्ति बनेको छ जुन सबै दिन प्रशिक्षित गर्न को लागी केहि नहीं प्रशिक्षित हुनेछ। कडा परिश्रमको बावजूद, खेतको खेतमा उनको प्रयास अपरिचित भएन।
यो स्थितिले ग्वेनउजी र तिनको परिवारको लागि धेरै निराशा र डरलाग्दो कारणले गर्दा उनीहरूले गरिब प्रदर्शनको बारेमा थाहा पाएका थिए उनीहरु उनको युवा क्लबबाट मुक्त हुन सक्थे।
दुर्भाग्यवश, ग्वेन्डोजीले डर र असुरक्षालाई तिनलाई अझ राम्रो बनायो। वर्ष 14 मा 2013 को उमेर मा, उनि underperformance को आधार मा PSG देखि रिलीज गरियो।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- Lorient मा नयाँ जीवन
मित्तो ग्वेन्जोजीको डरले नर्थ वेस्टर्न फ्रान्समा ठूलो अवसर पाएको थियो। त्यो वर्ष त्यो PSG बाट रिलीज भएको थियो जब एफसी लोरेन अकादमी भर्खरै व्यवसायको लागि खोलियो। गेंडेउजले यस अवसरमा ट्याप गरे, द्रुत रूपमा नामांकन गरे र लेरिन्टसँग एक सफल परीक्षण भयो। उसलाई खुशी छ !!!
Lorient मा, उनले साहसी पाए आफ्नो डरले किक। यो कडा परिश्रम, अधिक उत्साह र प्राकृतिक क्षमताको साथ उनीहरूलाई सबै भन्दा मनपर्ने कुरामा समाहित क्षमता संग युग्मित गरिएको थियो "फुटबल".
उनको प्रदर्शनको लागि धन्यवाद, यो केही समय अघि अघि ग्वेन्डोजी टोलीले आफ्नो सँगी देशीलाई तुलना गर्न थाले एड्रियन रब्बोट। उनीहरूले उनको सम्पत्तिमा शान्त रहेको र नाटकहरू ब्रेक गर्नेमा निकै प्रभावकारी भएकोमा उनको प्रशंसा गरे। कुनै पनि अन्य प्रतिभाशाली युवा जस्तै, गुन्डेउज़ी हरेक टीमका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी भए। गुएनडोजीको युवा जीवनको पुनर्संरचनाले आफ्ना आमाबुबालाई उनको प्यारो लोरेन्टको साथ आफ्नो सानो भाई मिलानलाई साथ दिन अनुमति दिन प्रेरित गर्यो। आफ्नो कडा मेहनतमा निरन्तरता दिदै, गुन्डोजीले लोरेन्टलाई २०१ 17 मा पहिलो फ्रान्सको अण्डर १ tournament प्रतियोगिता जित्न प्रेरित गरे।
यो विजयले तिनीहरूलाई बेवास्ता गरेन तर उसलाई उपनाम कमाईयो "डेविड लुइज"त्यो ब्राजिलको तुलनामा थियो। टूर्नामेंट विजय पछि, गेंडाउजी ले Lorient पहिलो टीम लाई बढावा दिए। यो उनको 18th जन्मदिन को दिन को रूप मा राम्रो तरिकाले समय थियो।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- तीव्र
गेंडाउजीले लरेन्टका लागि पहिलो पटक सिजनलाई सातौं स्थानमा समाप्ति गरे जुन तिनलाई दुखी बनायो। यो फ्रांसीसी शीर्ष विभाजनमा खेल्ने उनको आशिष्को साथ संघर्ष भयो।
पिचमा ग्वेन्डोजीको व्यक्तिगत बहादुरी उनीहरूको सहकर्मीहरूले पूरै फ्रांसीसी दोस्रो विभाजनमा बाँकी रहेका थिए। यसले कुनै समय लाग्न सकेन उनको स्वर उठेको थियो जसले पहिलेको फ्रान्सेलीको गोलकीपर उनको प्रबन्धकसँग विवादको सामना गर्यो Mickael Landreau। तिनीहरूका विद्रोहले विलियन्सियेसको विरोधमा खेल खेल्न थाले Mickael Landreau उनलाई हाइफेटिम भन्दा पहिले आफ्नो टोलीबाट फर्केर गए।
ग्वेन्डुजीको कार्यवाहीको परिणामले उनी तीन महिनाको लागि स्क्वाड बाहिर जमेको थियो। बारीमा, उनले आफ्नो कोचको निर्णयलाई जवाफ दिएपछि फिर्ता फर्काउन इन्कार गर्दा फिर्ता फर्काइयो। ग्वेन्डुजले खेलहरू हराएका थिए र निर्णय गरे कि उनी कुनै पनि नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको थिएनन्।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- ट्रान्सफर र अंग्रेजी फेममा उठाउनुहोस्
आफ्नो आउट-अफ-एभ दिनको दौडान म्याटिटो ग्वेन्डोजीको प्रेम आर्सेनलका लागि लन्डनबाट टाढा सुनेका थिए। साक्षात्कारका क्रममा, उनले आर्सेल्यान्ड स्काउट्सलाई क्लबलाई इंग्ल्यान्डको रूपमा हेरेपछि उनलाई एक खेलाडीको रूपमा विकास गर्न सक्थे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… पेरिस सेन्ट-जर्मर्मन गान्डौजी फिर्ता लिने चाहन्थे जसमा उनीहरूले एकपटक रिहा गरे। उनीहरूको पूर्व केटाले खुसीसाथ इन्कार गरेनन् शस्त्रागार। उनी सबै चाहन्थे कि उनीहरूको हृदयको लागि एक टीम थियो र त्यो सधैं उनको बचपन पछि सामेल हुन चाहन्थे। यो अद्भुत विकास हेर्दै, Unai Emery's स्थिति पहुँच गर्न स्काउट्स पठाउन निर्णय। तिनीहरूले चाँडै तिनलाई स्वीकार गरे, ट्राफिक प्रक्रियालाई छिटो-पछाडि र उनको हस्ताक्षरको लागि दौड जित्यो।
धेरै किशोर किशोरीले जस्तै राम्रो गरिरहेको थिएन उनको आर्सेलियनमा छान्थ्यो, तर गुन्डिउज फरक छ !. उनी सबै चाहन्थे कि एक क्लब हो जसले उहाँलाई पोषण नगर्ने तर धेरै खुसी बनाउनेछ।
शस्त्रागारमा सामेल भएपछि मात्र ग्वेन्डोजीको मिडफील्ड रचनात्मकताले प्रदान गरेको भन्दा बढी सराहना गरियो Granit Xhaka। यसले उनलाई अगस्ट अगस्त एनएनमएक्सको महिनामा महिनाको क्लबको खेलाडीलाई जित्यो।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
सँधै पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ कि म्याटियो गेंडाउजिस प्रेमिका हो...?
हामीले यो जानकारी प्रकट गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई बुझ्न चाहन्छौ कि हरेक युवा फुटबलर आफ्नो निजी जीवनको विवरण प्रकट गर्न चाहानुहुन्छ भने पनि अवस्थित छ। यो Matteo Geundouzi को मामला हो जो लेखन को समय मा उनको प्रेमिका या पत्नी हुनु को पहिचान प्रकट गर्न मा रुचि छैन।
बस राख्नुहोस्, उसले केवल आफ्नो जवान क्यारियरमा फोकस गर्न चाहन्छ। यो स्पष्ट छ कि उनको सामाजिक मिडिया पृष्ठ उनको प्रेमिका को फोटोहरु बाट भरी छ, यहां सम्म कि उनको बुबा, आमा, भाइ वा बहन पनि।
मित्तो ग्वेन्डोजी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
आफ्नो क्यारियर जीवनबाट टाढा जानु, गेंडाउजीसँग राम्रो सम्बन्ध छ अलेक्जेन्डर लेकाजेट र Aubameyang। ट्रो एक अद्भुत ब्रोन्सेन्स साझा गर्छ, खासकर जब दूर मेल को लागि एक साथ यात्रा।
दुवै मित्रहरू बीच, ग्वेन्डोजी धेरै नजिक छ Lacazette जसलाई उसले प्राय: आफ्नो ट्विटर खातामा मजाक गर्दछ।
पिच वा आफ्नो साथीहरूसँग खेल्नु पर्दैन, ग्वाइन्डुइजको उपस्थिति केही उत्प्रेरित र अशाबको सुरुवात गर्दछ। सामाजिक जोकहरूमा क्यारियर क्षमताहरू (तल भिडियो हेर्नुहोस्) - उहाँ सबैलाई पहिलोमा प्रेम गर्ने प्रेम हुनुहुन्छ।
Guendouzi स्वाभाविक रूप देखि बहादुर हो र परीक्षण र जोखिम को कम से कम डर देखि। तिनको जवान शक्ति र ऊर्जाको धेरै सम्पत्ति छ। Guendouzi डरलाग्दो छ र सधैं भिडियोमा देखेर शर्म गर्न कुनै पनि वरिष्ठ शस्त्रागार खेलाडी राख्न तयार छ।
अन्य कारणहरु मध्ये यो फुटबल फ्यानहरूले उसलाई प्रेम गर्दछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Matteo Guendouzi बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्यहरू पढ्नको लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।